Ngaba umxholo wakho we-SEO unokuba ngumvelisi we-backlink?
Icandelo elibalulekileyo kunomnye umkhankaso wokuthengiswa kwe-intanethi ufumana i-backlink ye-SEO esemgangathweni kunye nemigangatho ephuma kwimithombo yewebhu ehloniphekileyo. Kungaba nzima nakakhulu kwiiwebhusayithi eziza kutshanje ukufumana ii-link ezivela kwiindawo eziphezulu ze-PR okanye ukudala uqhagamshelwano kunye neebhloko ze-blogger. Nangona kunjalo, akusona isizathu sokuphelelwa lithemba. Kwaye abanye abathengisi abanomdla baneengxaki ngokufumana i-backlink efanelekileyo. Yingakho i-generic backlink generators zadalwa ukuze kube lula ukwenza inkqubo yokufumana izixhumanisi eziphezulu.
Isicwangciso se-SEO asinasiphelo xa umxholo wakho ungenzi kakuhle kwi-intanethi. Ingaphezulu kwe-80% yesicwangciso sakho sempumelelo seSET sincike kumxholo oshicilelayo oko kutheni kubalulekile ukuqwalasela ngakumbi umgangatho wakho wokuqukethwe kunye nokufaneleka.
Ngoko, ukuba umxholo wakho usebenza njengomvelisi we-backlink, eli nqaku liya kuba luncedo kuwe. Makhe sixoxe ngamanye amacandelo okuphuculwa kokuqukethwe okuza kubangela iqela lakho lokwakha unxibelelwano.
I-SEO i-backlink yobuchwepheshe
Yenza umxholo ocolileyo, unike abafundi bakho into entsha
Ukungakhathaleli komxholo wakho kunokuchazwa ngokuqinileyo kwaye kungekhona okukodwa kweetekisi zakho. Xa uqhuba uphando lwe-market niche, mhlawumbi ufunde amanqaku akho omncintiswano ovelisa amanqaku amaninzi kunye namaqendu. Nangona kunjalo, akusoloko isilungileyo esihle ukubhalela kwisihloko esifanayo ukuba ube ngumvelisi we-backlink njengokuba ezinye iiwebhusayithi zinokwenzeka ngokufanayo kunye nomxholo othile sele ufikelele kwimida. Yingakho ndincoma ukuba ungabhali phantsi kwezihloko ezifana neentlawulo zakho. Esikhundleni salo, uze neengcamango ezintsha kunye nezobuchule ezinokubakho ukufumanisa okubalulekileyo kubafundi bakho. Ngaphezu koko, kufuneka uphephe ukuzithethelela kumxholo wakho njengoko kubonakala kungavumelekile kwaye akuphakamisi umdla kumsebenzisi wakho.
Namhlanje, i-Google rankings ithembele kwi-backlinks quality ngaphandle kobuninzi babo. Yingakho kufuneka ukhangele amathuba okwakha izixhumanisi ezivela kwimithombo ephezulu yegunya lewebhu. Ukuphanda izikhundla zamagunya ezikwinqanaba eliphezulu ongathanda ukuba umxholo wakho ube yibhankini elixhomekeke kuyo lingakunika imibono emitsha malunga nomxholo ochaphazelekayo.
Jikela kubaphulaphuli bakho abajoliswe kuyo
Ukusebenzisa umxholo wakho njenge-backlink generator, kufuneka ukhenkce. Ukuba ubhala umxholo wakho nomsebenzisi engqondweni, uyayinika eminye imithombo yewebhu ebhenela kwabaphulaphuli abafanayo njengoko.
Ukuqonda ukuba ngaba umxholo wakho ubongoza abaphulaphuli bakho okanye cha, kufuneka uhlalutye olunzulu uphando kunye nophando lwakho olufunekayo lwabaxhasi.Unokuphinda uhlolisise injongo yomsebenzisi ngokubhala amanqaku esekelwe kwimigqaliselo emitsha yophando njengoko abafundi banamhlanje bangazibuza imibuzo eminye. Qinisekisa ukuba uphendula imibuzo efanelekileyo ejikeleze ngalinye igama eliphambili ukuba lihlale lifanelekileyo.
Ukuphucula amazwi akho
Ukuphucula indawo yakho ye-website isikhundla, unokwenza iifayile zakho ze-SERP zifanelekileyo kwaye zizithethe. I-serpet yokuqala ye-SERP inokunyusa inani lokuchofoza kunye nokuhambisa iphepha lakho kwiphepha lekhasi lokukhangela. Iimboniso ezitshintshileyo zingakhange zichaphazele ngokuthe ngqo indawo yewebhusayithi yakho kwi-SERP, ziza kubakho njengendlela ebalulekileyo yokuqulatha umxholo wakho kokubini kunye nabasebenzisi Source .